I-AdSense: Ungayisusa njani iNdawo kwiiNtengiso eziZenzekelayo | Martech Zone
I-AdSense: Uyisusa njani iNgingqi kwiiNtengiso eziZenzekelayo
NgoMvulo, Oktobha 5, 2020 NgoMvulo, Oktobha 5, 2020 Douglas Karr
Akukho mathandabuzo ukuba nabani na otyelele indawo yam akazi ukuba ndenza imali ngendawo ngeGoogle Adsense. Ndikhumbula okokuqala ndisiva i-Adsense ichazwa, umntu wathi yayiyiyo Intlalontle yeWebmaster. Ndidla ngokuvuma, ayigqibi nokuhlawula iindleko zam zokubamba. Nangona kunjalo, ndiyabulela ukuhlawula iindleko kwindawo yam kwaye iAdsense ijolise kwindlela yabo ngentengiso efanelekileyo.
Oko kwathethileyo, okwethutyana emva ndaguqula useto lwam lwe-Adsense ngokususa yonke imimandla kwindawo yam kwaye, endaweni yoko, ndenza ukuba iAdsense ikwazi ukwenza indawo ebeka kuyo iintengiso.
Ndivumele iAdsense ukuba yenze ngcono ukubekwa kweentengiso iinyanga ezimbalwa kwaye ndabona into encinci kwingeniso yam yenyanga. Nangona kunjalo, ibhena enkulu ebekwa nguGoogle ngaphezu igalari yam ekhokelayo yamanqaku ayithandeki:
Ngokuchasene noko unokucinga, Iintengiso ezizenzekelayo ikuvumela ukuba ulawule imimandla kunye nenani leentengiso ezifakwa nguGoogle kwindawo yakho. Ukuba ungena kwiGoogle Adsense, khetha Iintengiso> Ushwankathelo:
Kwiphaneli esekunene, kukho iqhosha lokuhlela kupapasho lwakho. Xa ucofa eli qhosha, iphepha livula zombini idesktop kunye nohlobo lweselfowuni kwindawo yakho apho ungabona khona ukuba uGoogle ubeka phi iintengiso zakho. Kwaye, okona kubaluleke kakhulu, ungawususa ummandla ngokupheleleyo. Ndikwenzile oku nge-bannoxious header banner ethatha indawo yam yonke.
Ngelixa le banner inokuqhuba ngakumbi ukucofa ingeniso, yoyikeka ngamava omsebenzisi kwaye indenza ndibukeke ngathi ndingu-spammer nje ozama ukwenza imali. Ndiwususile ummandla.
Ndibuye ndalahla ubuncinci benani leentengiso kwiphepha ngalinye ukuya kwi-4. Ungafumanisa ukuba kwicandelo loMthwalo wentengiso ngasekunene nakwicala. 4 ubuncinci ekuvumela ukuba ukhethe.
Kukho ezinye iindlela onokuthi uzenze kwaye uzikhubaze kwindawo yakho, kubandakanywa iintengiso ezikwiphepha, umxholo ofanayo, iintengiso ze-anchor, kunye neentengiso ze-vignette ezizizibhengezo ezigcweleyo zesikrini ezibonakala phakathi kwemithwalo yephepha.
Njengompapashi onikezela ngetoni yophando lwasimahla kunye nolwazi, ngethemba awunangxaki nokuba ndenza imali ngendawo yam. Ngaxeshanye nangona kunjalo, andifuni ukubacaphukisa abantu kwaye ndibanqande ekubuyeni!
tags: Iintengiso ezizenzekelayogoogle adsensekwenziwa kanjaniukwenza imali ngokupapashwaHlawula ngokucofa kanyesusa indawo
I-Adzooma: Lawula kwaye usebenzise iGoogle yakho, iMicrosoft, kunye neeNtengiso zeFacebook kwiQonga elinye